China 4 kọlụm miri ịbịaru haịdrọlik pịa rụpụta na ụlọ ọrụ | Ekechukwu
Mejupụtara SMC BMC haịdrọlik pịa
4 kọlụm miri ịbịaru haịdrọlik pịa
Automatic Ferrite Magnetik Hydraulic Press
Automatic SMC Production Line SMC igwe mpempe akwụkwọ ebu ...
Oghere 4 dị omimi na-abanye igwe na-adabara adaba maka usoro mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dịka ịgbatị, ekwe, crimping, akpụ, blanking, punching, mgbazi, wdg, a na-ejikwa ya maka ịgbatị ngwa ngwa na ịmepụta mpempe akwụkwọ.
A haziri igwe akụrụngwa dị ka H-echikọtara ọnụ nke nwere usoro kachasị mma, nkenke dị elu, ogologo ndụ na ntụkwasị obi dị elu, ma jiri ya mee ihe maka ịpị mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma nwee ike ịchọta mkpa nke mmepụta na oge 3 / ụbọchị.
Main cylinder nsogbu
Die Cushion ike
Max. mmiri mmiri mgbali
Main sịlịnda MKpọnwụ
Nwunye Cushion Stroke
Die fom size
Jectiongba ọsọ ọsọ
Ogologo oge na-agagharị
Ọdịdị nke igwe ahụ niile na-ewepụta njikarịcha kọmpụta kọmpụta na nyocha na njedebe nwere. Ike na nkwụsi ike nke akụrụngwa dị mma, ọdịdị ahụ dịkwa mma.
Mere 45 # esorowo ígwè, quenching na tempering
Ọma-egweri mgbe Rolling
A na-atụgharị elu ya ma mesịa kpuchie ya iji hụ na isi ike dị n'elu HRC48 ~ 55
Ike Ike≤ 0.8
Mụta Japanese NOK ika mma akara mgbanaka
Eduzi ọla kọpa plating, ezi na-eyi na-eguzogide, huu ogologo oge ọrụ nke cylinder
1.Servo System mejupụtara
2.Servo System mejupụtara
Ndụ nke bọtịnụ a nwalere kpamkpam, ọ gaghị emebi site na ịpị 1 nde ugboro.
Ihuenyo na mmejọ nke igwe, kọwaa ọrụ ihuenyo, kọwaa mkpu igwe, ma nyere ndị ọrụ aka ngwa ngwa mara ojiji igwe
A na-edozi usoro nchịkwa nke ndị na-achị Electronic n'adabereghị, yana ikike mgbochi nnyonye anya siri ike
Digital njikwa nke servo mbanye na mwekota na draịva
The n'ozuzu busbar capacitor na-n'ụzọ zuru ezu kwalite, na capacitor na wider okpomọkụ mgbanwe na ogologo ọrụ ndụ na-eji, na usoro iwu ndụ na-amụba site 4 ugboro;
Nzaghachi na 50Mpa bụ 50ms, mgbatị mgbali bụ 1.5kgf, oge enyemaka nsogbu bụ 60ms, na ngbanwe nrụgide bụ 0.5kgf.
Ngwurugwu nkwekorita a na-eme site na ngwanrọ Ansoft, na arụmọrụ electromagnetic ka elu; N'iji mkpali NdFeB dị elu, ihe nchara ígwè dị ntakịrị, arụmọrụ dị elu, na ọkụ dị obere;
3. Uru nke Servo System
N'iji ya tụnyere usoro mgbapụta ọdịnala na-agbanwe agbanwe, usoro mgbapụta mmanụ na-agwakọta ngwa ngwa ngwa ngwa nke ngwa ngwa nke servo moto na njide onwe onye na-achịkwa nrụgide mmanụ nke mgbapụta mmanụ, nke na-eweta nnukwu ikike ịzọpụta ike, na ume. ọnụego nchekwa nwere ike iru 30% -80%.
Nzaghachi ọsọ ọsọ bụ ngwa ngwa na oge nzaghachi dị mkpụmkpụ dị ka 20ms, nke na-eme ka usoro nzaghachi nke usoro hydraulic dịkwuo mma.
Ọsọ ọsọ ọsọ na-ekwe nkwa mmeghe na mmechi ziri ezi, ọnọdụ ziri ezi nwere ike iru 0.1mm, yana ọnọdụ ọrụ pụrụ iche pụrụ ịhazi ọnọdụ ziri ezi nwere ike iru ± 0.01mm.
Nkọwa dị elu, PID algorithm modul dị elu na-eme ka usoro nrụgide siri ike na mgbanwe mgbanwe nke ihe na-erughị Bar Ogwe 0,5, na-emeziwanye ngwaahịa dị mma.
Nchedo gburugburu ebe obibi
Noise: Olu mkpọtụ nke sistemụ hydraulic dị ntakịrị karịa 15-20 dB karịa nke mgbapụta na-agbanwe agbanwe na mbụ.
Okpomọkụ: Mgbe ejiri usoro servo mee ihe, a na-ebelata mmanụ mmanụ hydraulic n'ozuzu ya, nke na-eme ka ndụ nke hydraulic akara ma ọ bụ na-ebelata ike nke ngwa nju oyi.
Photo-Ọdụdọ Nchedo Front & N'azụ
Slide kpochidoro na TDC
Abụọ Aka Operation Guzosie
Circuit Nkwado Nkwado Hydraulic
Bufee Nchedo: Nchekwa Nchekwa
Oti mkpu na mmiri mmiri: Ọkwa mmanụ
Mmanụ ọkụ Warning
Onye ọ bụla eletriki akụkụ nwere bufee nchedo
Ihe mgbochi nchekwa
Mkpọchi mkpụrụ na-nyere ibughari akụkụ
Omume nile nke ndi oru akuko nwere oru nke nchedo, dika nkpuru oghoghari gha aru oru ma oburu na oghaghaghi ilaghachi onodu mbu. Slide enweghị ike ịpị mgbe obere obere ọrụ na-agbanye. Mgbe esemokwu na-eme eme, mkpu na-egosipụta na ihuenyo mmetụ wee gosi ihe bụ esemokwu ahụ.
1.Oil tank e debere jụrụ nzacha usoro (ulo oru efere-ụdị mmiri jụrụ ngwaọrụ, obi jụrụ site ekesa mmiri, mmanụ temperature≤55 "hụ na igwe nwere ike nwayọọ nwayọọ na ịpị na 24 awa.)
2.Hịịdrọlik na-arụ ọrụ na-ejikwa usoro njikwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na nnyefe nnyefe dị elu.
3.Adụ mmanụ ahụ nwere ihe ikuku ikuku iji kpọtụrụ ya na mpụga iji hụ na mmanụ adịghị emerụ mmanụ.
4. Njikọ dị n'etiti valvụ na-ejuputa na tank mmanụ na-eji nkwonkwo na-agbanwe agbanwe iji gbochie vibration ka a na-ebute ya na tank mmanụ ma dozie nsogbu nke mmanụ mmanụ.
Nke gara aga: Nnu ngọngọ haịdrọlik pịa
Osote: H etiti metal miri ịbịaru haịdrọlik pịa
Usoro nchịkwa hydraulic
Switzerland okporo ụzọ
Usoro nchịkwa eletriki
Chingmafe ike ọkọnọ
Ngwunye ọkụ eletrik dị ala
Mbelata ebe obibi (nhọrọ)
H etiti metal miri ịbịaru haịdrọlik pịa